Public Kura | » ‘आँशु लिएर आउने नागरिकलाई हाँसो दिएर पठाउनेछु’ ‘आँशु लिएर आउने नागरिकलाई हाँसो दिएर पठाउनेछु’ – Public Kura
जीवनकालको अधिकांश समय सामाजिक सेवामा बिताएका सिद्धार्थनगरका इस्तियाक अहमद खान ‘सादा जीवन, उच्च बिचार’का व्यक्ति हुन् । संविधानसभा सदस्यका रुपमा मुलुकको मूल कानुन निर्माणमा योगादन पुर्याएका खान अहिले आफ्नो नगरपालिकालाई सफा, स्वच्छ र ‘ब्युटिफुल’ बनाउन सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छन् । सादा व्यक्तित्व भएका व्यक्ति नगरपालिकाको नेतृत्व गर्न तम्सिएपछि अहिले सिद्धार्थनगरमा खानको पक्षमा जनलहर देखिएको छ । यसपटक सत्ता साझेदार गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख प्रत्यासी खानले सिद्धार्थनगरमा नेपाली कांग्रेसको बिरासत फर्काउने निश्चित जस्तै छ । आफ्नो पक्षमा आएको उभार देखेपछि खानले भारी मतले चुनाव जित्ने दाबी गरे । मतान्तरका हिसावले आफ्नो बिजय ‘रेकर्ड’धारी हुने उनले बताए । सिद्धार्थनगरका सबै वडामा घरदैलो सकेर मतदातासित व्यक्तिगत अन्तक्र्रियामा रहेका उनले निर्वाचन अगाडि जस्तै चुनाव जितेपछि प्रत्येक घरमा पुगेर जनताका समस्या बुझ्ने बताए । प्रस्तुत त, खानसित पब्लिक कुरा संवाददाताले गरेको कुराकानी :
तपाइँको प्रचार–प्रसार कार्यक्रम कस्तो चलिरहेको छ ?
राम्रो र उत्साहपूर्वक चलिरहेको छ । जनताले मलाई निकै माया गरिरहनु भएको छ । साथीभाई, दाजुभाई, दिदी–बहिनी सबैले माया गरिरहनु भएको छ । मेरा इमान्दार साथीहरु धेरै छन् । चाहे ती पुरुष हुन, या महिला । सबैले मलाई हौंस्याइरहनु भएको छ । मसँग इमान्दार र सच्चा साथी, भाई, बुवा, आमा, बहिनी छन् । त्यसमा मलाई घमण्ड पनि छ । मेरो सन्देश मतदाता समक्ष पुगिरहेको छ । मतदाताका अपेक्षा म समक्ष आइरहेका छन् । दोहोरो सम्वाद भइरहेको छ । सकभर सबैलाई भेट्ने प्रयास गरेको छु ।
रातदिन जनताको घरदैलोमा पुगिरहनु भएको छ, कत्तिको थाक्नुभयो ?
जनताको सेवाका लागि र ‘ब्युटिफुल’ सिद्धार्थनगर बनाउने अभियानमा छु । यत्तिकै दौडधुपले थाकियो भने भोलि नगरबासीको कसरी सेवा गरौंला र ? त्यसैले म थाकेको छैन । मतदाताको अपार समर्थनले हौंसिएको छैं । बरु नसुतेरै म आम मतदातासित छलफल र कुराकानीमा बिताइरहेको छु । समाजका लागि लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएको मान्छे । जनताको सुखदुःखमा हातेमालो गर्ने बानी परेको छ । यो समय भनेको जतिसकिन्छ जनतासित भेटघाटमा बिताइरहेको छु र पछि पनि विताउने छु ।
अहिले मतदाताको अपेक्षा के पाउनुभयो ?
सबै मतदाताले तपाइँ इमान्दार व्यक्ति हो, अगािड बढ्नुस् भनिरहनु भएको छ । सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ । धेरैजनाले मेरो नाम सुनेको बताउनुहुन्छ । पहिलोपटक भेट्दा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष भेट्न नपाउँदा फोन गरिरहनु भएको छ । दिनमा पाँच हजार कल फोन आइरहेका छन् । सबैको फोन उठाउँछु । फोनमा व्यस्त भएको देखेर घरदैलोमा व्यस्त साथीहरु रिसाउने अवस्था हुन्छ । म सकभर फोनमा भए पनि कुरा गर्न चाहन्छु । गरिरहेको छु । यस अवधिमा मेरो फोनको ब्याट्री तीनपटक बिग्रिसक्यो । नयाँ फेरँे । म सुतेको छैन । फोनमै भए पनि मतदातासित कुराकानीमा छु । सबैको शुभकामना छ । सबैले दुई हातले आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ । तपाइँ जस्तो मानिसको आवश्यकता छ भनिरहनु भएको छ । तपाइँ जित्नुहुन्छ भनिरहनु भएको छ । तपाइँ जस्तो हुनुहुन्छ, त्यस्तै रहनु होला, तपाइँ नै नगरलाई आवश्यकता छ भनिरहनु भएको छ ।
अहिले गठबन्धन छ, कस्तो सहकार्य भइरहेको छ ?
गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच एकदम सुमधुर सम्बन्ध छ । दुबैपार्टी एक भएका छौं । तेरो, मेरो छैन । हरेक प्रचारमा माओवादीबाट उपप्रमुखकी उम्मेदवार कमला थापा दिदीलाई भोट मागिरहेको छु । पहिले उहाँको लागि माग्छु, अनि मेरो लागि माग्छु । त्यसपछि वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि माग्छु । सौहार्द छ । अहिले त कार्यकर्ता उत्साहित छन् । दुबै दलका कार्यकर्ता मरिमेटेर लाग्नु भएको छ । गठबन्धनका पक्षमा लहर आएको छ, सिद्धार्थनगरमा अहिले ।
प्रचारका लागि समय पर्याप्त भएन जस्तो छ नि ?
धेरै समय होइन् । समय केही कम हुँदा सबै मतदातासित प्रत्यक्ष भेटघाट सम्भव भइरहेको छैन । तर, उहाँहरुसित फोनमै भए पनि कुराकानी भइरहेको छ । मैले गफ लगाएको होइन्, जित्नुपर्छ भनेर शुभकामना र सहयोग गर्ने जनाउँदैं हजारौं फोन आइरहेको छ । तपाइँकै आवश्यकता छ भनिरहनुभएको छ । मलाई फोन उठाउन धांै–धौं भइरहेको छ । जति फोन आइरहेका छन्, त्यतिले मात्रै भोट हाले पनि म जित्छु । भोटरले गरेको फोन नउठाउँदा रिसाउने जोखिम हुन्छ । धेरैले मैले घरदैलोमा रहेका कार्यकर्तालाई सम्झाएर भए पनि फोन रेस्पोन्स गरिरहेको छु । मतदातालाई निरास बनाउन चाहन्न ।
के तपाइँलाई जीत सुनिश्चित लाग्न थालेको हो ?
हो, एकदमै । मलाई आत्मैदेखि जीत पक्का लागिरहेको छ । जुन किसिमले आम साथीभाई र मतदाताको मप्रति सहानुभूति, माया प्राप्त भइरहेको छ, त्यसले त म भारी मतले चुनाव जित्दैछु भन्ने लागेको छ । सायद यसपटक रेकर्ड ब्रेक हुन्छ । मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ । धेरै नै अन्तरले जित्ने देखिरहेको छु ।
तपाइँ लामो समयदेखि समाजसेवामा संलग्न व्यक्ति हो । त्यसले पनि फाइदा मिलेको हा ?
धेरै नै फाइदा भइरहेको छ । मेरो नाम सुन्ने धेरै हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेट्दा हर्षले उफ्रिनु हुन्छ । लामो समयदेखि भेट्ने प्रयासमा रहेका व्यक्तिहरुसित कुराकानी भयो । नेपाली कांग्रेसमै आवद्ध नभए पनि मलाई भोट दिने मुड बनाएको धेरैले बताउनुभयो । यसले म खुसी छु । यो सबै सामाजिक गतिविधिले सम्भव भएको हो । त्यो लामो समयको सम्बन्धले मलाई पक्कै फाइदा मिल्नेछ । यस्तो सद्भाव मिल्दा मलाई बेग्लै इनर्जी प्राप्त भइरहेको छ । यो सुखद् हो ।
पार्टीबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ ?
गठबन्धनका दुबै पार्टीबाट निकै सहयोग मिलेको छ । पार्टीले व्यवस्थित ढंगले प्रचारका काम गरिरहेका छन् । दुबै दलका कार्यकर्ता ज्यान फालेर प्रचारमा जुट्नु भएको छ । हामीले लगभग घरदैलो पूरा गरिसकेका छौं । त्यसैले सोमबार नगरसभा पनि गरिसकेका छौं । त्यसमा धेरै कार्यकर्ता सहभागी गराएर एकता प्रदर्शन गरिएको छ । सभापछि शुक्ष्म ढंगले प्रचारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु छ । निर्वाचन आचारसंहिता ख्याल गरेर प्रचारका कार्यक्रम गरिरहेका छौं । मौन अवधिको पालना र निर्वाचन मर्यादित बनाउन सजग छौं । सबै नेता कार्यकर्ता एक भएर परिचालन भएका छौं ।
मतदाता शिक्षामा पनि केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
बिगत २/३ दिनदेखि हामीले मतदाता शिक्षामा ध्यान दिइरहेका छौं । दुई दलको गठबन्धन भएकाले भोट तलमाथि नहोस् भन्नेबारे चिन्ता छ । भोट बदर भएमा नतिजा तलमाथि हुनसक्छ । त्यसैले मत सदर गर्नका लागि पार्टी नै लागि परेका छन् । केही दिनदेखि पहिलो प्राथमिकता नै भोट बदर नहोस् भन्नेमा छ । यसमा कार्यकर्ताको भूमिका ज्यादै महत्तवपूर्ण रहेको छ । हामी पनि लागेका छौं ।
तपाइँले चुनाव जित्नेवित्तिकै गर्ने काम के हुन् ?
मेरो कार्यकालमा सुशासनमा केन्द्रित हुनेछु । सबैले नगरपालिकामा आफ्नै छोरा, भाई बसेको महशुस गर्ने वातावरण बनाउनेछु । त्यसैले म नगरपालिकालाई सबैको साझा घर बनाउन चाहन्छु । कुनै पनि दाजुभाईले नगरपालिकामा आएर बिरानो महशुस गर्न नपरोस् । आँशु लिएर आउने नागरिकलाई हाँसो दिएर पठाउनेछु । खुसीको आँशु बगाउँदैं फर्किने वातावरण बनाउने छु । नागरिकको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहोस् भन्नेतर्फ म सचेत छु । कसैले नगरपालिकामा काम लिएर आएपछि घुस दिन नपरोस् । म इमान्दारिता साथ काम गर्नेछु । सबै कर्मचारीलाई पनि इमान्दार बनाउनेछु । नगरपालिका साझा बन्नेछ । यो मेरो वाचा हो ।
तपाइँको जीत अभियानमा परिवारको पनि भूमिका छ ?
मेरो परिवार मात्र होइन्, सबै समुदायको सहयोग छ । अझ भनौं जबरजस्त सहयोग मिलेको छ । उहाँहरुको हौंसलाले मलाई निकै उत्साहित तुल्याएको छ । सबै समुदाय मेरो बिजयका लागि लागि परेका छन् । मसित नगरमा गुनासो भएको कोही मान्छे छैन । मैले घरदैलोमा यो कुरा बुझेँ ।
मतदातासित तपाइँको अनुरोध के छ ?
मैले लगभग सबै मतदाताको घरमा पुग्ने कोसिस गरेको छु । यस अवधिमा कोही छुट्नु भएको छ भने क्रिपया मेरो बारेमा जानकारी लिनुस् । मलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुस् । तपाइँहरुले भारी मतले मलाई बिजयी गराउनु भयो भने म गुनासो गर्ने अवसर दिने छैन । म सधैं तपाइँहरुको सेवामा समर्पित रहनेछु । पाँच वर्षका लागि तपाइँहरुले मलाई चुन्नु भयो भने म निरास तुल्याउने छैन । बिगतको नेतृत्वसित तपाइँहरु धेरै रिसाउनु भएको छ । नेतालाई घृणा गर्नुहुन्छ । मलाई अवसर दिनुभयो भने पाँच वर्षमा नेतालाई माया गर्ने वातारण तयार गर्नेछु । मेरो काम हेरेर सबै नेतालाई माया गर्नु हुनेछ । त्यसैले गठबन्धनका उम्मेदवार बिजयी बनाउन अनुरोध छ ।
तपाइँको प्रतिस्पर्धा कोसित छ ?
हाहाहा… साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो प्रतिस्पर्धा कसैसित छैन । म त धेरै अझ भनौं भारी मतान्तरले चुनाव जित्दैछु । मेरो जीत पक्का भइसक्यो । मलाई दाजुभाई, दिदीबहिनी र साथीहरुले फोन गरेर जीत सुनिश्चित छ भनिरहेका छन् । आजको दिनमा अरु उम्मेदवार म भन्दा निकै पछाडि छन् ।
म सिद्धार्थनगरमा पाँच वर्षका लागि चुनिने छु । तर, नगरपालिका जनप्रतिनिधि बिहीन त हुँदैन । यहीँ पाँच वर्षमा म आगामी ५० वर्षसम्मका लागि सिद्धार्थनगरको ‘रोडम्याप’ तयार गर्न चाहन्छुु । पाँच, दश, पन्ध्र र त्यसैगरी ५० वर्षसम्म नगरपालिकामा के गर्नुपर्छ भनेर गुरुयोजना तयार गर्नेछु । त्यसले म भन्दा पछाडि आउने जनप्रतिनिधिलाई सहज हुनेछ । मेरो अन्तरआत्माको आवाज हो । सिद्धार्थनगरलाई ‘ब्युटिफूल’ सहर बनाउन चाहन्छु । ढुक्क हुन अनुरोध छ ।